ဖိုက်ဘာမှန်အမိုးခုံး / ဖိုင်ဘာကလတ်
ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အလိုက် အခြေစိုက်အရင်းခံရာပါသောပိရမစ်ပုံ၊ အခြေစိုက်အရင်းခံရာပါသောအဝိုင်းပုံ ၊ အခြေစိုက်အရင်းခံရာပါသောမြင်းမိုရ်ပုံ၊ အခြေစိုက်အရင်းခံရာပါသောကက်ဆွန်ပုံ၊ အဝိုင်ပုံ၊ ဖိုင်ဘာကလတ်အမိုးခုံကို သေသေချာချာထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ထို့အပြင် အဆောက်အအုံတိုင်းသို့ ဖိုင်ဘာကလတ်အမိုးခုံ လုံလောက်စွာတပ်စင်သည့်အနုပညာနှင့် အလှဆင်ဒီဇိုင်းအလုပ်တို့အဖြစ် ထူးခြားသည့်ဒီဇိုင်းတို့ကို ရှိပါသည်။
1. အက်ဆစ်-ဘေ့စ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ခုခံနိုင်သည်။
2. ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက် (သို့)တပ်စင်သည့် အဆောက်အအုံလက္ခဏာအလိုက် ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
3. ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်သူမှ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ပစ္စည်းအသုံးပြုသည်။ အမိုးဖုံအလေးချိန်မလေးမလံစေရန် ဖန်မျှင်ဖိုင်ဘာကိုလည်း အပြားအသုံးပြုသည်။
- ယိုစိမ့်မှုအတွက်3မီလီမီတာလျှင်5နှစ်၊5မီလီမီတာလျှင် 10 နှစ်တွင် အားမခံပေးမည်ဖြစ်သည်။
- တပ်စင်မှုအတွက် တစ်နှစ်တွင် အာမခံပေးမည်ဖြစ်သည်။